श्वान गान – श्वान पुराण- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
श्वान गान – श्वान पुराण
चौपाया जीवमा सबैभन्दा पहिले रत्तिएर घरेलु पशु बनेको थियो भन्छन्– कुकुरलाई । मानिससितको उसको संगत निरन्तर र चिरकालको छ । अतुलनीय बफादारी, अटल इमान, निसर्त समर्पण र निश्छल प्रेम कुकुरका यस्ता अप्रतिम गुण हुन्, जो मानव–भाषा बोल्न नसक्ने यस जीवबाट मानिसले सिक्न सक्छ । आफ्ना यिनै गुणले मानिसलाई रूवाउने सामर्थ्य पनि राख्छ ऊ, जस्तो यस श्वान–गाथाले बताउँछ ।
कम्पाउन्डभित्रैको एउटा कुनामा अम्बाको रूखमुनि निकीको चिहान बन्यो । जमिनको सतहमा चप्लेटी ढुंगा लगाएर त्यसलाई स–सानो समाधिस्थलको रूप दियौं, जहाँ केही समय रोज मैले एउटा फूल चढाइरहें । चौपायाको कब्रिस्तान नै भने हुन्छ हाम्रो घरको सानो कोठेबारीलाई ।
श्रावण ३०, २०७८ वसन्त थापा
आज म यो आलेख त्यसरी सुरु गर्दै छु, जसरी विद्वान् लेखक डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठ प्रायः आफ्नो प्रबन्ध रचना सुरु गर्छन् । फरक यत्ति छ, उनी कसैको गीत या कविताको पङ्क्ति सिरानमा उद्धृृत गर्छन्, म भने आफैंले कोरेको गीतको उतार यहाँ गर्दै छु । उर्दू शेर वाचन गर्नुअघि शायरहरू ‘गौर फर्माइए’ भन्ने गर्छन् । म पनि भन्छु ‘गौर फरमाउनुहोला’ :
हिउँमा झरीमा आँधीमा
आउनेछु म तिम्रो समाधिमा
चढाउन थुँगा सम्झनाको
बिहान दिउँसो गोधूलिमा
अनायास एकदिन अनाहुत आयौ
निस्पन्द जीवनको धड्कन बनेर
मन बाटिकामा बस्ती बसायौ
प्रेमको हरदम गुञ्जन बनेर ।
मायाको यस्तो संसार बनायौ
रम्यौ त्यसैमा अरूलाई रमायौ
सुगन्ध हरदिन यस्तो फैलायौ
उजाड आगनलाई उद्यान बनायौ ।
पर्खन्थ्यौ दिनरात संघार कुरेर
विछोडको पल–पल गन्ती गरेर
खुसीले उत्फुल्ल हुन्थ्यौ कति
खोजेको मुहार सामुन्ने पाएर ।
आउला भनी अब कसले बाटो कुर्ला
घरीघरी स्नेहको पुकार कसले गर्ला
स्वप्न थियो या मायावी माया
यसै बिलायो शून्यमा तिम्रो काया
निर्बन्ध भयौ अब संसारी लोकबाट
मुक्ति पायौ भोक शोक र रोगबाट
दिनु दियौ सक्ने जति सबैलाई
गरेनौ आशा केही पाउने अरूबाट ।
पढ्नेलाई लाग्न सक्छ यो विरह र वियोगको अभिव्यक्ति हो कुनै व्याकुल प्रेमीको । प्रायः गीतको भावभूमि वियोगपूर्ण नै हुने गर्छ । दुःख, विशाद, वेदना, विछोड, उदासी, व्याकुलता कच्चा धाउ हुन् गीत निर्माणका । मैले पनि यस्तै वियोगमा बह पोखाउने क्रममै लेखेको हुँ माथि उल्लिखित गीत, जसलाई म ‘श्वान गान’ भन्न रुचाउँछु, जो मैले मेरो परिवारकै एउटा सदस्यसरहको प्रिय जीवको मृत्युमा आहत भएर लेखेको हुँ, झन्डै पाँच वर्षअघि ।
त्यस प्रिय जीवको नाउँ निकी थियो, जो चौरासी वर्षको लामो आयु बाँचेर आखिर निमोनियाको सिकार बन्यो । निकी असलमा कुकुर थियो, पोथी कुकुर । अरूको नजरमा ऊ सामान्य कुकुर भए पनि परिवारका हामी उसलाई कुकुर भन्दैन थियौं । अरूले त्यसो भनेको पनि मन पराउँदैन थियौं । ‘निकीले खायो ?’, ‘निकी कता गयो ?’, ‘निकी सुत्यो ?’ भन्थ्यौं । निकीको असलियत कसैलाई बताउनै परे हामी बरु ‘हाम्रो डग’ भन्थ्यौं । उसलाई कुकुर भन्नु उसको तौहिन ठान्थ्यौं । त्यसैले त्यस्तो मायालु प्राणीको सम्झनामा लेखिएको यस गीतलाई संस्कृतको सहारा लिएर मैले ‘श्वान गान’ भनेको हुँ ।
हाम्रो पर्खाल जोडिएको घरकी बातुनी स्वभावकी छिमेकी गृहिणी मेरी पत्नीलाई जहिले पनि ‘ए निकीको मम्मी’ भनेर बोलाउने गर्थिन् । तिनले त्यो साइनो लगाएको अस्वाभाविक लाग्दैन थियो हामीलाई । निकी थिई ज्ञानी स्वभावकी — कुनै उपद्रो नगर्ने, भनेको खुरुक्क मान्ने, भागेर बाहिर कहिल्यै नजाने, घरमा आएका पाहुनालाई नपिरोल्ने । हामी कतै बाहिर गए घरको फाटकमा बसेर हामीलाई कुरिरहने । ऊ कुनै उच्च ‘पेडिग्रीवाल’ कुलीन उत्पत्तिको जीव नभई नेपालमा बहुधा पाइने मिश्रित नस्लकै उपज थिई । रङ उसको गोल्डेन रिट्रिभरको जस्तो सुनौलो थियो । ‘बर्ड अफ प्याराडइज’ जस्तो देखिने उसको पुच्छरले उसको चालमा राजसीपन थपेको थियो ।
निकी कसरी हाम्रो घरमा दाखिल भई र परिवारको हिस्सा बनी त्यस प्रसंगसित एउटा सानो कथा जोडिएको छ । मैले मेरो गीतमा उसलाई अनाहुत आयौ भनेर त्यसै लेखेको होइन । किनभने उसलाई हामीले नचाही ननिम्त्याई कसैले हाम्रो घरमा भित्र्याइदिएको थियो । कुरा सन् २००४ जुलाई महिनाको हो । हामी दुवै जोईपोइ बैंकक र सिंगापुर घुम्न गएका थियौं । बाह्र–चौध दिनपछि हामी घर फर्कंदा छोरी खुसी त थिई, तर केही बिराम गरेजसरी उसको मुहारमा संकोचको भाव पनि थियो । उसले ‘हजुरहरू नरिसाउनुहोला, यी यो मैले गिफ्टमा पाएकी छु’ भनेर भित्र कोठाबाट सानो खैरो रङको एउटा शिशु–श्वान बोकेर हाम्रो सामुन्ने ल्याई । त्यो पोथी छाउरी थिई ।
हाम्रो पहिलो प्रतिक्रिया चरम दिक्दारीको थियो । किन ल्याएको भनेर झर्कियौं पनि । त्यसरी दिक्दारी मान्ने र झर्कने मनासिब कारण थियो हाम्रो । हामीले त्यस्तो चौपाया पालेर, हुर्काएर अनि गुमाएर प्रशस्त दुःख पाइसकेका थियौं । त्यसैले हामीले अबउप्रान्त कुनै छाउरा–छाउरी नपाल्ने भनेर एक किसिमले दृढ निश्चय गरेका थियौं । त्यो कुरा बुझेकी छोरीले डर मानीमानी छाउरीलाई देखाउने कारण त्यही थियो । तर, भएछ के भने हाम्रो अनुपस्थितिमा छोरीको जन्मदिन साथीहरूले घरैमा पार्टी गरेर मनाएछन् । छोरीको श्वान–प्रेम बुझेका कान्तिपुर एफएममा उसका सहकर्मी साथीहरूले पैसा खर्चेर त्यो छाउरी उपहारमा ल्याइदिएका रहेछन् ।
केहीबेरमै मेरी पत्नीको दिल पग्लिहाल्यो भुक्लुक्क, निर्दोष र मायालु अनुहारकी एक महिना पनि नपुगेकी छाउरी देखेर । मेरो बेखुसीको आवरण पनि धेरै बेर टिक्न सकेन । नाउँ जुराउने प्रस्ताव गरी छोरीले । मेरी पत्नीले तत्काल भनिन्– ‘निकी’ । निकी हामीलाई बैंकक र पटाया घुमाउने टुर गाइडको नाउँ थियो । अंग्रेजी राम्रो बोल्ने चिनियाँ मूलकी टाठी–बाठी, हँसिली, मिजासिली र हेर्नमा पनि राम्री निकीको व्यवहारबाट हामी दुवै निकै प्रभावित भएका थियौं । तिनकै स्मृतिलाई जीवन्त राख्ने मनसायले मेरी पत्नीले यो नाउँ प्रस्तावित गरेकी थिइन्, जसप्रति मैले पूर्ण सहमति जनाएँ ।
यसप्रकार नचाहँदा नचाहँदै हाम्रो परिवारको हिस्सा बनेर आफ्नो मायामा लुटुपुटु पार्दै अपेक्षाकृत लामै आयु बिताएर हामीलाई रुवाउँदै गई निकी । कुकुरको एक वर्ष मानव जीवनको सात वर्ष बराबर हुन्छ भन्छन् । त्यस अर्थमा ऊ चौरासी वर्षकी भएकी थिई । घर कम्पान्डभित्रैको एउटा कुनामा अम्बाको रूखमुनि उसको चिहान बन्यो । जमिनको सतहमा चप्लेटी ढुंगा लगाएर त्यसलाई स–सानो समाधिस्थलको रूप दियौं, जहाँ केही समय रोज मैले एउटा फूल चढाइरहें र त्यही बन्यो तिहारमा फूल चढाउने ठाउँ पनि ।
तर, हाम्रो कम्पाउन्डको जमिनमा त्यसप्रकार दफन गरिने निकी पहिलो पाल्तु चौपाया थिएन । एक प्रकारले चौपायाको कब्रिस्तान नै भने हुन्छ हाम्रो घरको सानो कोठेबारीलाई । त्यहाँ सुरुमा दफन गरिनेमा थियो टोबी । ऊ हाम्रो पारिवारिक जिन्दगीमा प्रवेश गर्ने पहिलो चौपाया थियो ।
टोबीको प्रवेश हुनुअघि कुकुर राख्ने शोख ममा कहिल्यै पलाएन । अर्काको घरमा डेरा गरी बस्ने मानिसका लागि त्यो लङ्गडा सोख ठहरिन्थ्यो । त्यसमाथि मैले एकचोटि मात्र होइन, दुई–दुईचोटि सास्ती पाएको छु कुकुरले गर्दा, पहिलोचोटि धरानमा र दोस्रो पटक काठमाडौंमा । धरानमा बहुला मानिएको कुकुरले मेरो कुहिनामा ङ्याक्क पारेर गएको थियो र काठमाडौंको बागबजारमा एक रात एउटा भुस्याहाले त्यसरी नै पिंडौलामा । दुवै पटक चौधचौधवटा सुई घोपिमाग्नुपरेको थियो पेटमा नाइटोवरिपरि । त्यसको दुखाइ कुन हदको हुन्छ, त्यो भुक्तभोगीलाई मात्रै थाहा हुन्छ ।
यसैकारणले पनि हुन सक्छ, कुकुर पालौं भन्ने चाहना ममा नजागेको । तर, चार वर्षको छोरो र ऊभन्दा तीन वर्ष जेठी छोरी भने कुकुर पालौं भनेर उल्कैसित जिद्दी गर्न थाले । म कुनै तरहले पन्छाउने गर्थें उनीहरूको जिरहलाई ।
यस्तै बेलातिर सामाखुसी गोंगबुमा धानखेतको फाँटमाझ एउटा स–सानो ओत बनाउन लागेको थिएँ कुनै यत्नले । राजीव गान्धीको सौजन्यले लागेको नाकाबन्दी र पहिलो जनआन्दोलनको सल्किँदै गरेको झिल्कोका बाबजुद इँट र कंक्रिटको त्यस कंकालले घरको स्वरूप ग्रहण गर्दै गएको थियो । अनि जति सक्यो चाँडो आफ्नो घरमा सर्नुपर्छ भन्ने भावनाले परिवारमा जोड पकड्दै गयो । त्यस्तो एकान्तमा जानु छ, घरको रखवारी गर्ने एउटा कुकुर हुनु अनिवार्य छ भन्ने कुरा आयो । हुन्छ भन्नुबाहेक त्यस प्रस्तावलाई टार्ने अर्को उपाय मसित बाँकी रहेन । संयोगात्, धेरै खोजिरहन परेन । मैले उसबखत एउटा पार्टनरसित मिलेर चलाएको रेस्टुराँको खरिदफरोख्तका कारण पुरानो भन्सारको एउटी तरकारी पसल्नीसित मेरी पत्नीको हिमचिम भएको थियो र त्यही हिमचिमले गर्दा तत्कालैजसो एउटा भाले छाउरो हामीलाई प्राप्त भयो । यस्तै जात र ‘ब्रिड’ को हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह थिएन । हामीलाई घरमा पाल्न लायक एउटा कुकुर भए पुग्थ्यो, जो बिनापैसा सित्तैंमा मिलेको थियो । हो, पोथी पाल्नुको आफ्नै झन्झट हुने हुनाले भाले नै होस् भन्नेचाहिँ चाहेका थियौं । खैरो रङको त्यो छाउरो भुक्लुक्क थियो, जस्तो सानोमा प्रायः सबै कुकुरका छाउरा–छाउरी हुने गर्छन् ।
हाम्रो परिवारमा दाखिल भएको त्यस नयाँ सदस्यको नाउँ जुराउने कुरा आयो अब । मैले एलेक्स हेली नामका अश्वेत अमेरिकी लेखकको ‘रुट्स’ भन्ने शीर्षकको किताब पढिसिध्याएको धेरै भएको थिएन । लेखकले दुई सय वर्षअघिदेखिको आफ्नो पुर्ख्यौली जरा पहिल्याउँदै लेखेको त्यो उपन्यास सन् १९७० को दशकको मध्यतिर छापिएको थियो र निकै चर्चित बनेको थियो । पश्चिमी अफ्रिकाको ग्याबोनबाट कसरी उनका पुर्खालाई फलामे साङ्लाले बाँधेर गोरा व्यापारीहरूले अमेरिका पुर्‍याएका थिए र पशुसरह कमारोका रूपमा बेचेका थिए, त्यसको मर्मस्पर्शी कथा बुनिएको त्यस पुस्तकको प्रभाव मेरो मनमा अझै ताजा थियो । त्यसैको एउटा पात्रको नाम सम्झेर मैले ‘टोबी’ नाम सुझाएँ, जुन सुझाव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।
टोबीसहित हामी सामाखुसी बन्दाबन्दैको घरमा सर्‍यौं । त्यसको केही कालपछि पुरानो भन्सारको दाताबाट मेरी पत्नीलाई फेरि अर्को कुकुरको अफर मिल्यो । उनीहरूकहाँ कुकुर धेरै भएकाले एउटा दिने भएका थिए । हामीलाई पनि लाग्यो– ‘एक से भले दो’ र त्यो अफर स्विकार्यौं । त्यो पनि भाले थियो र त्यसलाई हामीले नाम दियौं नोपो । टोबी मझौला कदको आम चौपायाको रूपमा विकसित भयो । ऊ धेरै उपद्रयाहा र चञ्चल थिएन । उस्तरी दुःख नदिने सुधो टाइपको जीव थियो । उता नोपो निस्क्यो एक नम्बरको छुकछुके र उपद्रयाहा । झन्डै बक्सर जातको झल्को दिने नोपोको उचाइ भुइँबाट मुस्किलले दुई बित्ता हुँदो हो, धानखेतमा पसे नदेखिने । हेर्दा लाम्चो र भुइँमै टाँसिएको जस्तो लाग्ने । मौका मिल्यो कि घरबाहिर जाने, जथाभावी दौडने र फर्कन नमान्ने । कौसीको पर्खालमा समेत चढेर उसलाई दौडनुपर्ने । एक पटक ऊ खस्यो कौसीको पर्खालबाट आफ्नै आँखा सामुन्ने । पसाउन लागेको धानको खेतमा ऊ केहीबेर निस्पन्द लोटिरह्यो । लाग्यो, उसको ज्यान गयो । तर, केही निमेषमै उठेर ऊ धानखेतमा दौडियो । त्यो हदको चकचके थियो नोपो ।
त्यस्तैमा एक दिन बिरामी पर्‍यो टोबी र दौडाएर पुर्‍यायौं त्रिपुरेश्वरस्थित भेटेनरी अस्पतालमा । डाक्टरले जाँचपड्तालपछि घुँडामास्तिरको भागमा रौं काटेर उसको नसामा सुई हालिदिए र फेरि आउन भने । गोंगबुको बसपार्क नबनेको बेला । सामाखुसीमा फाट्टफुट्ट मात्र ट्याक्सी पाइने, मध्यदिनमा पनि त्यहाँ ट्याक्सी जान नमान्ने । कोही कुकुर भनेपछि बोक्न नमान्ने । अनेक दुःख गरेर, कहिल्यै भने सकीनसकी काइनेटिक स्कुटरमै बोकेर हामी डाक्टरले भनेजति पटक गइरह्यौं र सुई हालिरह्यौं । तर, टोबीको अवस्था सुध्रनुको साटो झन्झन् बिग्रँदै गयो । ज्वरो बढेको बढ्यै, कचिराले छोप्लाजस्तो आँखामा पानी देखिन थाल्यो । सास फेर्न गाह्रो हुँदै गयो र खाना बिस्तारै खान छाड्यो । बेलाबेला अकस्मात् चिच्याउँथ्यो, सायद पीडा असह्य भएर होला । एकदिन बिहान उठेर हेर्दा टोबीको निष्प्राण शरीर अरट्ठ परेको, जिब्रो मुखमा टोकिएको र मुख–नाकभरि र्‍यालसिंगान लतपत थियो । बरा डिस्टेम्पर नामको घातक रोगको सिकार बनेको थियो । डिस्टेम्पर रोग र त्यसको खोपबारे हामी पूर्णतः अनभिज्ञ थियौं । त्यो रोग लागेपछि कुकुर सितिमिति बाँच्दैन रहेछ । यसप्रकार हाम्रो कोठेबारीमा दफन गरिने टोबी पहिलो पाल्तु कुकुर बन्यो ।
एउटा गए पनि अर्को त जिउँदो छ भनेर सन्तोष मान्ने सानो ठाउँ भने थियो । तर, केही समयपछि नोपोलाई पनि त्यही ज्यानमारा रोगले लग्यो, जुन रोगले टोबीलाई लगेको थियो । डाक्टरले त डिस्टेम्परको भाइरस घर–कम्पाउन्डमा रुमल्लिरहन्छ भनेर बताएका थिए । दोस्रो कुकुर बन्यो नोपो कोठेबारीमा दफन गरिने ।
आँखा डुलाउन लाग्यौं, अर्को कुकुरको खोजीमा । सामाखुसीमै चिनजानको महर्जन परिवारमा छाउराहरू रहेको थाहा पाएर उनीहरूकहाँ गई मेरी पत्नीले जिद्दी गरेरै एउटा छाउरो लिएर आइन् । पाँच–छ महिना भइसकेको त्यस छाउरोको नाम खैरे थियो । राम्रो थियो हेर्नमा, तर उसित अप्ठेरो भाषाको थियो । ऊ केवल नेवार भाषा बुझ्थ्यो । ‘यता आइज’ होइन ‘थन वा’ भनेर बोलाउनुपर्थ्यो उसलाई । रहँदाबस्दा हाम्रो पर्वते बोली बुझ्न थाल्यो र बडो स्मार्ट कुकुर निस्क्यो खैरे । जहिले पनि सतर्क, चनाखो । भुक्न र परे टोक्न तत्पर । घरको रखवारीको हाम्रो चाहना उसले पूरा गरिदिएजस्तो भएको थियो हामीलाई । तर, उसले पनि आयु छोटो लिएर आएको रहेछ हामीसित बस्नलाई । उसलाई सम्झने अनेकौं कारण छाडेर ऊ गयो र उसलाई पनि हाम्रो कोठेबारीको एउटा भागमा स्थायी बास दियौं ।
खैरे गएपछि घरमा उत्पन्न हुन गएको रिक्तता भर्नलाई मानौं केही समयको अन्तरालपछि आइपुग्यो कताबाट हो लोबो । मेरी पत्नीको बानी थियो घर छेउछाउ आउने र बाटामा भेटिने कुकुरहरूलाई बिस्कुट, पाउरोटी वा जे खानेकुरा साथमा छ त्यो दिने । उनको पुच्कारबाट तानिएर हुनुपर्छ लोबोले हाम्रो घरमा आश्रय लिन थालेको । लोबो निख्खुर कालो रङको हुर्किसकेको कुकुर थियो, केही अग्लो कदको । तर, हेर्दै ऊ प्रताडित र त्रसित देखिन्थ्यो । सम्भवतः उसले राहत महसुस गर्‍यो होला हाम्रो आश्रयमा । उसलाई केही नाम त दिनैपर्ने थियो र हामीले उसलाई भन्न थाल्यौं लोबो । ऊ छिटै रत्तियो । तर, जीउ जहिले पनि ज्वरो आएको जस्तो तातो रहन्थ्यो र केहीगरी उसको पुच्छरमा हल्का धक्का लागे पनि ऊ कुइँकुइँ गर्थ्यो । सकेसम्म आफ्नो पुच्छरलाई ऊ छुन दिँदैनथियो । डाक्टरले जाँच्दा पत्ता लाग्यो, झ्यापुल्ले रौंबाट छोपिएको उसको पुच्छर छिनाउने गरी कसैले रबरब्यान्ड टनक्क बाँधिदिएको रहेछ । हेर्नोस् मानिसको निर्दयता र निष्ठुरता ! त्यही इन्फेक्सन भएकोले ऊ कराउँदोरहेछ । पुच्छरलाई अपरेसन गरेर काट्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, डाक्टरले ‘यसलाई जोगाउने प्रयास गरिहेरौं’ भनेर घाउमा मलमपट्टी लगाइदिए । दुई–चारपटक त्रिपुरेश्वर धाएपछि लोबोको घाउ पुरियो र ऊ पूर्ण स्वस्थ बन्यो । तर, उसको आयु पनि कम रहेछ र ऊ पनि हाम्रो कोठेबारीमा अर्को चिहान थपेर गयो ।
त्यसपछि आए पेप्सी, डल्ली अनि डल्लीका दुइटा छाउरा ।
पेप्सी नाउको पोथी कुकुर हाम्रो घरमा कसरी आइपुग्यो अहिले म सम्झन्न । मलाई लाग्छ, त्यसलाई परित्यक्त अवस्थामा फेला पारेर मेरी पत्नीले दयावश लिएर आएकी थिइन् । त्यो पनि लोबोजस्तै हुर्किसकेको र ठ्याक्कै लोबोझैं निख्खर कालो रङको थियो । सानो–सानो साइजको, राम्रै जातको क्रस थियो सायद । उसलाई हामीले नाउँ दियौं पेप्सी । झन्डै पेप्सी आएकै बेलातिर हो डल्लीले पनि हाम्रो घर कम्पाउन्डमा प्रवेश गरेको । वास्तवमा घरछेउ दुई जीउकी उसलाई दयनीय हालतमा देखेर मेरी पत्नीले नै खाना ख्वाउन कम्पाउन्डभित्र हुलेकी थिइन् । अनि बच्चा पाउने बेला भइसकेको उसलाई टहराको खुला भागमा ठाउँ पनि बनाइदिइन् । डल्ली थिई खाँटी भुस्याहा कुकुर, अंग्रेजीमा जसलाई भनिन्छ ‘मोङ्गेल’ । उसको रङजस्तो आम भुस्याहा कुकुरहरूको हुन्छ त्यस्तै थियो— खैरो । साइज भने पहाडको पुँडी सुँगुरको जस्तो होचो र डल्लो । त्यसैले हामीले उसलाई भन्यौं डल्ली ।
डल्लीले बच्चा पाउने बेला कुकुरको बच्चा पाउने सिजन थियो क्यार ! कताकताबाट हो हाम्रै घर अघिल्तिरको चउरमा उनीहरू दयनीय हालतमा टुप्लुकिन्थे । मेरी पत्नी उनीहरूलाई बोलाउँदै टहरामा ठाउँ दिन्थिन् । म ‘हुँदैन यसरी’ भनेर आपत्ति जनाइरहन्थें, त्यो नसुनी उनीहरूलाई ल्याइरहन्थिन् उनी । त्यो टहरा प्रसूतिगृह र रुग्णालयजस्तो बनेको थियो एकताका । पहिले डल्ली सुत्केरी भई अनि त्यसपछि तीनवटा अरू । सुत्केरी माउ, छाउराछाउरी केही आश्रयहीन र घरको पेप्सीसमेत गर्दा एक समय टहरामा २४ वटा कुकुरको बगाल जम्मा भयो । हाम्रो छोरा अझै सम्झन्छ, आफूले औंलाले तोकी तोकी कुकुरका छाउराछाउरीहरू गनेको । के रनाहा लागेको थियो कुन्नि मेरी श्रीमतीजीलाई ! आफू नखाने भए पनि राँगाको मासु ल्याई–ल्याई झोल र सुरुवा बनाएर खान दिन्थिन् कुकुरको त्यस बथानलाई ।
कालान्तरमा ती सबै चारखुट्टे पाहुनाहरू आ–आफ्नो बाटो लागे । डल्लीले भने हाम्रो घरमै बस्न रुचाई । गज्जबकी थिई डल्ली ! हाम्रो सुरक्षामा खुब ध्यान दिने । कोही पराया मानिस कम्पाउन्डमा घुसेमा उसलाई टोक्न पनि बेर नमान्ने ।
पेप्सी अलिक चञ्चल स्वभावकी चनमती थिई । फाटक खुल्नासाथ बाहिर तीर जसरी निस्कने । एक रात मलाई घर फर्कन केही ढिला भएको थियो । फाटक खोल्दा कुन सड्को पेप्सी बाहिर गई मैले पत्तो पाइनँ । निस्पट्ट अँध्यारो, त्यसमाथि कालो पेप्सी । भोलिपल्ट बिहान मात्रै पेप्सी बेपत्ता भएको थाहा भयो । अनेक खोजी गर्‍यौं, पत्ता लागेन । ऊ बेपत्ता हुने कारणी म भएकाले मनको विशादमा अपराधबोध पनि थपिएको थियो मेरो । धेरै महिनापछि छिमेकको टाउन प्लानिङको सडकमा पेप्सी देखिई । घरमा खुसियाली छायो ऊ फेला परेकोमा । तर, यो पेप्सी पहिलेको पेप्सी थिइनँ । उसले आफ्नो नाम भुलिसकेकी थिई । गायब भएको थियो उसको चञ्चलता । ऊ मानो कुनै यातनाको सिकार भएर विस्मृत बनेकी थिई । खानमा पनि कुनै रुचि थिएन उसलाई । उसको यो दुःखद रूपान्तरण वास्तवमा हृदयविदारक थियो । उसलाई आफ्नै हालतमा छाडिदिनु उत्तम लागेर हामीले कम्पाउन्डको फाटक खुला गरिदियौं । ऊ अन्यमनस्क भावले सुस्तसुस्त फाटकबाहिर गई र फेरि हामीले उसलाई देखेनौं ।
डल्ली हामीसितै बसेकी थिई र दोस्रो बेतमा उसले जन्माएकामा दुईवटा भुकुल्ले छाउरालाई हामीले पाल्ने विचार गर्‍यौं । पहिलेको दुःखद अनुभवले सिकाएको हुनाले सबभन्दा पहिले हामीले उनीहरूलाई आठ हप्ता ननाघ्दै डिस्टेम्परको खोप दिनु थियो । भर्खर–भर्खर केनेल क्लबहरू उम्रिँदै गरेको बेला थियो । घर–घर गई सेवा दने एउटा चिनेकै व्यक्तिले चलाएको केनेल क्लबमार्फत खोप दियौं । तर, त्यसको केही हप्तामै ती दुवै भुकुल्ले छाउरा त्यही डिस्टेम्पर रोगको सिकार भए । हुनसम्मको दुःख र क्षोभ भयो । के खोप र त्यसको मात्रा सही थियो ? आइस बक्समा ल्याएको खोप म्याद गुज्रेको थियो कि ? यस्तो शंका किन पनि लाग्यो भने खोपका बाबजुद छाउरा मरेकोमा सिकायत गर्न मैले गरेको फोन चिनेको भन्ने त्यस मानिसले कहिल्यै उठाएन । शुल्क भने सरकारी अस्पतालमा भन्दा कैयौं गुणा बढी लिन्थे अनि जिम्मेवारी चाहिं नलिने । पछि भेट्दा त्यस मानिसले खोपको कुन्नि कति प्रतिशत असफल हुन्छ भनेर यसै पन्छियो । त्यो सफेद झूट थियो । यो कस्तो व्यावसायिक नैतिकता ? यस चोटबाट रन्थनिएर उसबेला ‘हिमाल खबरपत्रिका’ मा मैले लेख्ने गरेको ‘ऋतुविचार’ नामको आफ्नो स्थायी स्तम्भमा ‘पशु र नरपशु’ भनेर मनको भडास पोखेको थिएँ ।
जे होस्, अब बाँकी थिई डल्ली । उसलाई त हामीले कुनै खोप, कुनै सुई केही दिएका थिएनौं । कुनै औषधि ख्वाएका थिएनौं । ऊ खाँट्टी भुस्याहा थिई, त्यसैप्रकार बाँची र स्वाभाविक मरण मरी । उसका छाउराहरूलाई झैं उसलाई पनि आफ्नै कोठेबारीमा दफन गर्‍यौं ।
हाम्रो परिवारसित जोडिएको टोबीदेखि डल्लीसम्मको यो जीवनकाल लगभग चौध वर्षको थियो । हरेकको मृत्युले गहिरो आघात छाडेर गएको थियो हामीमा । त्यसैले अबउप्रान्त यो जीव नपाल्ने र उनीहरूको मायाको बन्धनमा नबाँधिने निश्चय हामीले गरेका थियौं । त्यसलाई हाम्रो ‘तिसरी कसम’ भने हुन्छ । तर, त्यो कसम लिएको केही समयपछि नै निकी आइपुगेकी थिई छोरीको ‘बर्थ डे गिफ्ट’ बनेर, जसबारे मैले सुरुमै उल्लेख गरिसकेको छु ।
निकी आएको ठीक चार वर्षपछि हाम्री छोरीको बिहे भयो । उसको बिहामा आएको उपहारमा सबैभन्दा अजुबा र महँगो उपहार थियो, तीन हप्ता पनि नपुगेको कुकुरको छाउरो । कामले काठमाडौं बस्दै गरेकी ड्यानियला नामकी चिलीकी साथीको उपहार थियो छोरीलाई त्यो छाउरो, जो थियो पक्का ‘पेडिग्रीवाल’ कुलीन जातको ‘कक्कर स्पानियल’ । लामकाने खसीजस्तो लामा–लामा कान हुने होचो कदको कक्कर स्पानियोल सिकारी कुकुर मानिन्छ र उत्तिकै इन्टेलिजेन्ट पनि । फसाद ! जुन घरमा बिहा गरेर छोरी जान लागेकी थिई, त्यस घरमा अघिबाटै कम्तीमा दसवटा कुकुर थिए भिन्नभिन्न जातका । यो दाइजो लिएर जान नसक्ने भएकाले उसले माइतीमै हामीसित छाडीराखी नासोका रूपमा ।
ड्यानियलाले दिएको हुनाले मेरी पत्नीले हत्त न पत्त त्यस छाउरोको न्वारान गरिन् ‘ड्यानी’ नाम दिएर । ड्यानी थियो युरोपेली नस्ल र साहेबी खानदानको । उसको हेरचाह र खानपिन पनि सोही स्तरको हुनु जरुरी थियो । निकीकै पालादेखि हामीले निजी क्लिनिकमा लगेर रेबिज मात्र होइन डिस्टेम्पर, कोरोना, हेपाटाइटिस आदि यावत् खोप नियमित तवरमा दिन थालेका थियौं । ड्यानीको हकमा पनि हामीले त्यही गर्‍यौं । निकी बिना तालिम हुर्केकी थिई, तर ड्यानी तालिमको हकदार थियो । प्रहरीको डग स्क्वाडका एक जना अधिकृत मित्रलाई गुहार्‍यौं र उनले सहृदयतापूर्वक आठ–दस दिन आएर आधारभूत तालिम दिए । त्यसबाट ड्यानीले ‘आउ, जाउ, बस, खाउ’ जस्ता आधारभूत निर्देशन बुझ्न सक्ने भयो । त्यसभन्दा लामो तालिम दिनलाई साथीको समय र हाम्रो हैसियतले भ्याउँदैन थियो । हामीले यतिमै चित्त बुझायौं ।
ड्यानीमा अजस्र ऊर्जा थियो, सिकारी जातको न ठहरियो । बोटबिरुवामा बस्न आउने चरा, परेवा र कागलाई पनि झम्टन जान्थ्यो । छाडा बिरालो त ढिम्किन पाउँदैनथ्यो हाम्रो घर कम्पाउन्डमा । घरभित्र र बारीका मुसा त कति मार्‍यो कति ! ड्यानी र निकीको यस जोडीले मिलेर झन्डै दस वर्ष हाम्रो घरलाई आवाद राखे अनि परिवारलाई आनन्द दिए । निकी त एक हिसाबले लामो आयु बिताएर गई, तर ड्यानीको भने समय अझै बाँकी थियो । ऊ भर्खर एघार वर्षमा हिँड्दै थियो । उसलाई लागेको घातक रोगको कारण हाम्रो अनाडीपन थियो र त्यसभन्दा हृदयविदारक कुरा के थियो भने असह्य सास्तीबाट छुटकारा दिलाउन उसलाई चिरनिद्रामा सुताउने इन्जेक्सन दिनुपरेको थियो । अतिशय मायाले दूध, ल्याक्टोजेन र बिस्कुट बढ्ता दिनाले उसको गिजामा क्यान्सर भयो, जसले गर्दा अनेक उपचारका बाबजुद ऊ बिलकुल खान नसक्ने भयो । उसको सास्ती देख्न नसकेर त्यो कठोर निर्णय लिनुपरेको थियो ।
जतिवटा पाल्यौं ती सबैको मृत्यु हाम्रा लागि अकथनीय दुःखको स्रोत थियो । तैपनि बढी मर्माहत भएका थियौं टोबीको दारुण मृत्युले जो हामीले नयाँ घरमा साक्षात्कार गर्नुपरेको पहिलो मृत्युको घटना थियो । त्यसपछि बज्र चोट दिएको थियो निकी र ड्यानीको मृत्युले, जुन बेलाको अवशाद अहिले पनि ताजै रहेको अनुभूति हुन्छ । यी दुवैको मृत्युले नै मलाई विशादपूर्ण गीतको रचना गर्न विवश तुल्यायो ।
निकी बितेको पुग–नपुग एक वर्षपछि ड्यानी बित्यो जुलाई २०१९ मा र उसलाई निकीको छेउमा दफन गर्‍यौं । उसैको शोकमा लेखेको हुँ तलको गीत । गौर फर्माउनुहोला :
तिमी छौ यहीं यतै
गएका छैनौ कतै
छौ हाम्रो निःश्वासमा
प्रत्येक श्वास प्रश्वासमा
फैलिई खुला आकाशमा
चपल क्रीडा देखाउँथ्यौं
आई फेरि हसाउँथ्यौ ।
लाग्छ तिमी सुतिरहेछौ
आई काखमा घुस्रनेछौ ।
भनौं उपहार दैवको
या सौगात भाग्यको
मानों थियौ देवदूत
सिर्जियौ संसार प्रेमको ।
दियो तिम्रो यादको
कहिले निभ्ने छैन
त्यस्तो क्षण हुने छैन ।
दुई वर्ष भयो ड्यानी गएको । तर, त्यस धक्काबाट हाम्रो मनमस्तिष्क अझै बौरिएको छैन । फेरि कसैको मायाको जालोमा परौं, त्यो आँट बटुल्न सकेका छैनौं ।
इति श्वान गान एवं श्वान पुराण । यो पुराण सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फूलको माला ।
प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७८ ०९:५१
सिनेमाले सपना देख्न सिकायो । क्रान्तिकारी र प्रगतिशील भनाउँदाहरूको दृष्टिमा सिनेमा हेर्ने बानी हेयपूर्ण क्रियाकलाप थियो । कागजमा छापिएको भन्दा पर्दाको पुस्तक मैले धेरै पढेको छु सायद ।
फाल्गुन ८, २०७७ वसन्त थापा
बम्बई सहरको केन्द्र भागमा मराठा मन्दिर नामको एउटा ख्यातनामा भवन छ । बम्बईबारे जानकार कसैले पनि मराठा मन्दिरको नाम नसुनेका होवोइन । धेरैजना त त्यहाँ गएका पनि हुन सक्छन् । नामले यसलाई मराठाहरू अथवा महाराष्ट्रका मूल निवासी मराठाहरूको मन्दिर या उपासना स्थल भन्ने जनाउँछ । तर, यो त्यस्तो खालको मन्दिर विल्कुल होइन । यदि यो मन्दिर हो भने फिल्मकलाको प्रदर्शन गरिने मन्दिर हो । अर्थात् यो फिल्म देखाइने सिनेमाघर हो, सिनेमाहल हो ।
धरानमा पनि यस्तै मन्दिर बन्यो ‘शिव सिनेमा हल’ को नाममा देशमा पहिलो आमनिर्वाचन भएको सालतिर वा त्यसको एक सालअघि । खुलेको साल यकिनसाथ भन्न नसके पनि चतरालाइनमा बनेको त्यस हलमा पहिलो प्रदर्शन गरिएको फिल्मको नाम भने मलाई याद छ र त्यो फिल्म मैले हेरेको पनि थिएँ । त्यो थियो ‘छु मन्तर’ जुन फिल्मका हिरो थिए जोनी वाकर, जो उसबेलाका कहलिएका जोकर या कमेडियन थिए । कुनै नामी हिरोको फिल्म प्रदर्शनबाट उद्घाटन नगरेर किन एक कमेडियनको फिल्मबाट हलको शुभारम्भ गरिएको थियो त्यो त थाहा भएन । एक–दुई वर्षअघि बनेको फिल्म सस्तोमा पाएर हलमालिकले त्यसो गरेको हुन सक्छ । फिल्म हल भन्नु के थियो धान चामल राख्ने एउटा गोदामजस्तो थियो— एक तले, ठूलो र लाम्चो । आधासरो इँटा र सिमेन्ट, आधासरो काठका बाकलबाट बनेको त्यस हलको छाना जस्तापाताका थिए । त्यसले गर्दा दर्के पानी परेको बेला टिनको छानाबाट आउने आवाजले हलभित्रको साउन्डलाई खाइदिन्थ्यो । भेन्टिलेसनको राम्रो बन्दोबस्त नभएकाले गर्मीमा दर्शकहरू उसिनेका अण्डाजस्ता हुन्थे । जे होस्, शिव सिनेमा आइदिएर धरान नगरका बासिन्दाको जीवनमा ठूलो बहार ल्याइदिएको थियो । नत्र सिनेमा हेर्नलाई धरानका हामीले कि त हिउँदको बेला पाल या तम्बु गाडेर चल्ने ‘टुरिङ टाकिज’ लाई पर्खनुपर्थ्यो वा फुस्रेमुन्तिर स्थापित इन्डियन ‘कोलोनी’ को विश्वकर्मा पूजा वा स्वतन्त्रता दिवसजस्ता अवसरलाई कुर्नुपर्थ्यो ।
भीमनगरमा बाँध या कोसी ब्यारेज निर्माण गर्ने सिलसिलामा भारत सरकारले धरानमा खडा गरेको आधारशिविर थियो ‘कोलोनी’ । त्यसलाई ‘इन्डियन कोलोनी’ पनि भनिन्थ्यो, तर छोटकरीमा त्यो ‘कोलोनी’ भनेरै चिनिन्थ्यो । भारतीय कर्मचारीहरू बस्नलाई एक तले आवासहरू बनाइएका थिए र प्रशासनिक कार्यालय भवनहरू पनि थिए त्यहाँ । त्यसबाहेक ट्र्याक्टर, बुलडोजर, ट्रिपर, ट्रक, लरी, डम्पर, जिप आदि अनेकथरीका वाहनहरूको ग्यारेज र मरम्मत केन्द्र पनि कोलोनीभित्र थियो । त्यसैले विश्वकर्मा पूजाले विशेष महत्त्व राख्थ्यो र त्यसलाई धुमधामसित मनाइन्थ्यो । यद्यपि भारतीय स्वतन्त्रता या गणतन्त्र दिवसमा पनि सानातिना कार्यक्रम हुन्थे । विश्वकर्मा पूजाको केही दिन अघिदेखि नै त्यहाँ चहलपहल हुन्थ्यो, रंगीबिरंगी ध्वजापताका टाँगिन्थे, पूजाको पन्डाल खडा गरिन्थ्यो, माइकमा हिन्दी फिल्मका गाना बजाइन्थ्यो । पूजाको दिन प्रसाद वितरण हुन्थ्यो र हाम्रा लागि सबभन्दा रमाइलो कुराचाहिँ पूजा भएको साँझ हिन्दी फिल्म पनि मुफतमा हेर्न पाइन्थ्यो । कुनै बेला तके भएर हो दुई–चार साँझ नै लगालग फिल्म देखाइन्थ्यो । फिल्महरू धेरैजसो ‘गणेश विवाह’, ‘हर हर महादेव’ जस्ता खालका वा भारतीय फिल्म डिभिजनद्वारा निर्मित स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी सन्देशमूलक कार्टुनहरू र एज्रा मीरले बनाएका डकुमेन्ट्रीहरू हुन्थे । तर, भन्नु उसो होइन, मैले दिलीप कुमारको ‘देवदास’ त्यही कोलोनीमा हेरेको थिएँ ।
यसरी बिनाटिकट फिल्म हेर्न पाइने अर्को ठाउँ कोलोनी मास्तिर फुस्रेबजारको सिरानमा रहेको ब्रिटिस क्याम्प थियो । चारकोसे झाडी मुखैको घोपामा विशाल एरिया ओगटेर पक्की र स्थायी क्याम्प बनाउने काम अघि बढिरहेको थियो । त्यसनिम्ति फुस्रेमा अस्थायी क्याम्प खडा गरिएको थियो । अस्थायी भने पनि गोरा साहेब र तिनका परिवार तथा सैनिक–गैरसैनिक स्टाफ बस्ने आवासदेखि सानोतिनो अस्पताल र खेल मैदानसमेत क्याम्पभित्र बनेका थिए । बेला मौकामा, खासगरी गर्मी याममा खुला आकाशमुनि क्याम्पको हाताभित्रको सानो मैदानमा क्याम्पमा बस्ने गोरा साहब र तिनका परिवार तथा अन्य स्टाफका लागि बेलाबखत फिल्म देखाउने गरिन्थ्यो । फिल्म देखाइने दिन त पहिलेबाटै तोकिएको हुँदो हो । गोराका छोराले त्यसै त कहाँ गर्थे । तर, त्यसबारे हाम्रो टोलसम्म अर्थात् साबिकको माथ्लो छाता वा माथ्लो खहरे र हालको लक्ष्मी चोकसम्म खबर सधैं आइपुग्दैन थियो या ढिलो आइपुग्थ्यो जतिन्जेलमा फिल्म सुरु भइसकेको हुन्थ्यो । थाहा पाएको दिनमा भने सुझी न बुझी इङ्लिस फिल्म हेर्नलाई हामी धावा बोल्थ्यौं फुस्रेको ब्रिटिस क्याम्पमा । साहेब र मीमहरू काउच या कुर्सीमा बसेका हुन्थे । हामी स्थानीय र अनाहुत दर्शकहरू चाहिँ गेगरयुक्त मैदानमा थचक्क बस्थ्यौं । फिल्म हेर्ने क्रममा गोरा साहेब र मिमहरू कहिले हाँस्थे, कहिले खासखुस गर्थे, कहिले सुक्सुकाएजस्तो पनि गर्थे । हामीलाई भने माने त मतलब ! पर्दामा मान्छे चले पुग्यो ! तर, पर्दामा देखापर्ने सबै पुरुष उस्तै लाग्थे भने नारी पात्र पनि छुट्ट्याउन हामी असमर्थ थियौं । उनीहरूले बोलेका बुझ्नु त आकाशको फल भइहाल्यो । त्यो दिक्दारीलाई मेटाउन ढुंगाका ससाना गिर्खा प्रोजेक्टरले फ्याँकेको प्रकाशपथमा पर्नेगरी उफार्थ्यौं र पर्दामा त्यसको छायाँ देखेर दंग पर्थ्यौं । अनि हामी हल्ला र छुकछुक पनि बढ्तै गर्थ्यौं । यस्तै बदमासीले गर्दा होला पछि क्याम्प बाहिरकालाई त्यहाँ गएर फिल्म हेर्न पूर्ण निषेध गरियो । हामी उसबेलाका गँवार बासिन्दाहरूको पानी नपरेको जीउ र मैलो लुगामा गर्मीको बेला परेको पसिनाको मिश्रित गन्धले उनीहरूको घ्राणशक्तिलाई बढ्तै चुनौती दिएकाले पनि हुन सक्छ त्यो प्रतिबन्ध लागेको ।
सिनेमा हेर्ने अर्को सम्भावना भनेको विराटनगर गएको खण्डमा हुन्थ्यो । त्यहाँ हिमालय टाकिज धेरै वर्षअघिदेखि नै सञ्चालनमा रहेको थियो । तर, उसबखत विराटनगर भनेको अर्कै संसार, अर्कै विश्व र अर्कै दुनियाँ थियो धरानवासीका लागि । अहिले जसरी बसमा सरर डेढ–दुई घण्टामै पुग्न सकिने भए पो !
तर, मैले भने विराटनगरमा हिमालय टाकिजको ठूलो पर्दामा फिल्म हेरिसकेको थिएँ र सिनेमाको स्वाद चाखिसकेको थिएँ । धरानमा हाम्रो घरको खाँबा गाडिनुअघि हामी केही काल विराटनगरमा बसेका थियौं । मेरा बाले आमाको साथै ट्याउँ ट्याउँ बोल्ने मलाई धनकुटाबाट लिएर जानुभएको थियो । पछि उहाँले आफ्नो कान्छा भाइलाई पनि बोलाउनुभयो । नाताले काका भए पनि उमेरमा धेरै फरक नभएकाले हामी दुई साथीजस्ता थियौं र काकाभतिजा मिलेर सिनेमा पनि हेरेका थियौं । पान दोकान, चिया दोकान या अर्काको घरमा रेडियोमा बज्ने हिन्दी गीतहरू सुनेर तिनबारे म धेरै हदसम्म परिचित भइसकेको थिएँ । यसैले निजी रूपमा म अलिक बढ्तै पुलकित भएको थिएँ धरानमा सिनेमा हल बनेकोमा । मेरा दावलका अरूलाई पनि यस्तै अनुभूति भएको हुनुपर्छ । बिजुली नआएको ठाउँमा सिनेमाहल आउनु निकै ठूलो कुरा थियो । सुषुप्त र गतिहीन अवस्थामा रहेको नगरमा केही प्रगति भइरहेको आभास त्यसले दिएको थियो । त्यसबाट वयस्क र पाकाहरूलाई पनि खुसी नै लागेको हुनुपर्छ ।
सिनेमाको टिकटका लागि चाहिने पैसा जोरजाम गर्ने समस्या बेग्लै कुरा थियो । आफूभन्दा ठूलाको हात समातेर होस् या हुनेखाने घरका साथीहरूलाई उचालेर होस् या आमाको सानो खुत्रुके बट्टामा लुकीछिपी हात हालेर होस् सिनेमा हल पुगिहाल्ने । तीन आना, पाँच आना, नौ आना, बाह्र आना यस्तै थियो थर्ड क्लास, सेकेन्ड क्लास, फर्स्ट क्लास र स्पेसल क्लासको टिकटको दररेट । सोह्र आनाको एक रुपैयाँ हुन्थ्यो उसबेला ।
पर्दा नजिक सबभन्दा अगाडिका केही सिट लहरको खण्डलाई थर्ड क्लास भनिन्थ्यो । त्यहाँ दर्शकले अडेसो नभएको सपाट बेन्चमा खाँदाखाद गरेर बस्नुपर्थ्यो । पाँच आना टिकटको सेकेन्ड क्लासमा भने बेन्चमा अडेसो लागेको हुन्थ्यो र एउटा बेन्चमा पाँच जना बस्न सकिन्थ्यो । नौ आनाको फर्स्ट क्लासमा भने हथेलो भएका कुर्सी हुन्थे र तिनमा नम्बर पनि राखिएका हुन्थे । बाह्र आनाको स्पेसल क्लासका कुर्सीमा नम्बर लागेका हुन्थे र कुर्सीमा बस्नलाई र अडेस लगाउनलाई पातलो गद्दा पनि लागेको हुन्थ्यो । आफ्नो निजी हैसियत भने पर्दाको नजिक तीनआने बिनाअडेसोको बेन्चमा बसी ठाडो घाँटी लगाएर फिल्म हेर्ने थियो ।
यो फिल्म हेर्ने र यो नहेर्ने भनेर छानिरहने सुविधा नै थिएन, कम से कम मेरा लागि । फिल्म हेर्न पाए पुग्यो । भोकोलाई खान पाए पुगिहाल्छ, बासी भात–सासी भातको के मतलब ? पैसाले गर्दा नै मन लागेको फिल्म हेर्न नपाई फेरिन्थ्यो र त्यसको ठाउँमा अर्को आउँथ्यो । उसबेला फिल्म पनि धेरै दिन नटिक्ने । खुबै चले दस–बाह्र दिन चल्थ्यो र हप्ता नपुग्दै फेरिइहाल्ने । सरदर एक हप्ता हुँदो हो फिल्म चल्ने समय । फिल्म आउँथे बम्बईमा रिलिज भएको लगभग दुई वर्षपछाडि मात्र, दुनियाँ ठाउँको चक्कर लगाएर । उसबेलाको फिल्म वितरण प्रणालीको चक्र त्यस्तै हुँदो हो ।
फेरिएको फिल्मको बजारभरि पोस्टर टाँसिन्थे र जीपमा रोज माइकिङ गरिन्थ्यो । जिपबाट फिल्मको पर्चा पनि छरिन्थ्यो जसमा फिल्मका कलाकार, संगीतकार, गीतकार, निर्देशक आदिको नाम दिइएको हुन्थ्यो । साना भुराहरू ज्यान फालेर ती छरिएका पर्चा बटुल्न जिपको पछिपछि दौडन्थे । जिप कच्ची सडकमा धूलो र धूवाँ उडाउँदै अघि बढ्थ्यो । माइकमा उद्घोषकले भन्थ्यो, ‘दाजुभाइ तथा दिदी बहिनी, शिव सिनेमाको रुपौलो पर्दामा अपार भीडका साथ चलिरहेछ फलाना फलानाद्वारा अभिनीत फलाना फिल्म । मौका नगुमाउनोस्, फिल्म प्रदर्शन हुने समय दिउँसो ३ बजे र साँझ ६ बजे ।’ कहिलेकाहीँ उद्घोषकले फिल्मका हिरो हिरोइनको नामबाहेक संगीतकारको नाम पनि उल्लेख गर्थ्यो । किनभने त्यतिबेला सचिनदेव वर्मन, रवि, शंकर जयकिसन र ओपी नय्यरजस्ता संगीतकारको नाम फैलिसकेको थियो । खुला जिपको दुई साइडमा फिल्मको पोस्टर टाँसेको काठको ठूलो फ्रेम झुन्ड्याइएको हुन्थ्यो र जिपमा उभिएको उद्घोषक एक हातमा माइक समातेर नयाँ सिनेमा आएको सन्देश दिन्थ्यो ।
त्यस्तो सन्देशबाहक उद्घोषकको आफ्नै अदाकारी हुन्थ्यो र प्रस्तुतीकरणको शैली पनि आफ्नै । एक जना थिए बिफरले हल्का छाप छाडेको अनुहार र श्याम वर्णका महेश पलिखे नामका सिनेमा उद्घोषक । तिनी अक्सर छातीको माथिल्लो भाग देखिने गरी जानाजान टाँक खोलिएको आधा बाहुलाको सेतो रङको बुससर्टमा हुन्थे र माइकमा सिनेमाको खबर यसरी फैलाउँथे सबै काम छाडेर अहिल्यै सिनेमा हलतिर कुदौं जस्तो लाग्ने । आवाज पनि तिनको भरिलो र वजनदार थियो, मानिसले टाढैबाट तिनको स्वर चिन्ने । प्रस्तुतीकरणको आफ्नै मौलिक तरिका थियो तिनको । हामीलाई लाग्थ्यो, ती महेश दाइ क्या भाग्यमानी ! जिपमा सरर चढेर नगर परिक्रमा गर्न पाइने, दिनहुँ सिनेमा हेर्न पाइने र नगरवासी सबैले चिन्ने कस्तो काइदाको नोकरी ! हाम्रा लागि ती लोकल अमिन सयानी थिए र एकप्रकारको रोल मोडल । तिनको यही आकर्षक अदाकारी र अल्फाजले धेरै अरूझैँ तानिएर घरको बार्दलीमा आउँथिन् चतरालाइनकी एउटी नवयौवना । तिनीसित महेश दाइका आँखा जुधे, उनीहरूबीच प्रीति बस्यो र कालान्तरमा उनीहरूको बिहे पनि भयो । मलाई लाग्छ, उनको यो प्रेमकहानी सारा धरान नगरलाई थाहा थियो ।
एक मिनेटको अन्तरालमा तीनपटक बिजुलीको घण्टी बजेपछि हलभित्रको बत्ती निभ्थ्यो र सिनेमा सुरु हुन्थ्यो । कोही बिनाटिकट बलजफ्ती भित्र नपसून् र हूलमूल नगरून् भनेर ढोकामा टिकट चेक गर्न प्रायः मुस्तैद व्यक्ति खटिएका हुन्थे ।
‘इन्टरभल’ अर्थात् मध्यान्तर भएको जानकारी दिन त्यस्तै घण्टी एकपटक बज्थ्यो । बाहिर जाँदा फेरि भित्र पस्नलाई गेटकिपरले हरेकलाई पास दिन्थ्यो । मध्यान्तरको समयमा मानिसहरू भित्रबाहिर गरिरहँदा चटपटेवालाहरूले ‘चना जोर गरम’ या ‘मुंगफली’ भनेर हलभित्र कराउँदै कागजको सोलीमा चटपटे वा बदम बेच्थे । त्यसरी चना र बदम बेच्नेले शिरमा पनि कागजकै टोपी लगाएका हुन्थे ।
मध्यान्तरको समयबाहेक अघिपछि पनि चलिरहेको फिल्म कहिलेकाहीँ हठात् रोकिन्थ्यो र हलमा बत्ती झलमल्ल बल्थे । त्यस्तोमा दर्शकहरू ‘रिल काट्यो’ भनेर कराउँथे । धेरैको भनाइमा फिल्म चलेको सुरुको एक–दुई दिनमा हेर्नु र फिल्म फेरिने बेला पछि हेर्नुमा फरक हुन्थ्यो । त्यतिन्जेलमा फिल्मको रिल काटेर धेरै छोटो पारिसकिएको हुन्थ्यो उनीहरूको भनाइमा । त्यसरी रील काट्नुपर्ने कारण मेरो समझदेखि बाहिरको कुरा थियो । तर, नभन्दै अरू समयमा घुम्दै जाँदा सिनेमाहलको प्रोजेक्टर रुम बाहिर फिल्मका लामाछोटा टुक्राटाक्री फालिएका भेट्थ्यौं, जसलाई हामी टिपेर ल्याउँथ्यौं के–के न फेला पारेजस्तो गरेर । त्यो देख्दा रिल काटिने कुरा साँचो हो कि जस्तो पनि लाग्थ्यो ।
अनि सिनेमा सकिएर बाहिर निस्कँदा सस्ता न्युजप्रिन्ट कागजमा चलिरहेको र पहिले चलेर गइसकेका फिल्मी गाना छापिएका पर्चा बेच्न ल्याउँथे । आधा आना पर्ने भए पनि त्यस्ता पर्चा सधैँ त किन्न सकिन्न थियो । तर, दुःखजिलो गरी किनेका त्यस्ता पर्चाहरूलाई म किताबहरू सँगै जतनसाथ राख्ने गर्थेँ ।
शिव सिनेमाहल खुलेको तीन या चार वर्षपछि धरानको रत्नरोडमा अर्को सिनेमाहल खुल्यो— गणेश टाकिज नामको । यी दुई सिनेमा हलका नाम शिव र गणेश राखिएको भए तापनि ती नाम भगवान्लाई समर्पित गरेर राखिएका थिएनन् । शिव सिनेमाका मालिक भूमिपति सेठ शिवप्रसाद आचार्य थिए, त्यसैले हलको नाम शिव राखिन गएको थियो । उता गणेश टाकिजका मालिक धनाढ्य व्यापारी लक्ष्मीप्रसाद श्रेष्ठले आफ्ना दिवंगत जेठा छोरा गणेशको सम्झनामा त्यो नाम राखेका थिए ।
ढाँचा र ढबमा यो नयाँ सिनेमा हल पुरानोभन्दा धेरै फरक थिएन । अंग्रेजीमा ‘इट्स डिफरेन्ट बट सेम’ (फरक तर उस्तै) भनेझैं उस्तै चारवटा क्लास, उस्तै कालो पर्दा झुन्डिएका चारवटा ढोका । सिट संख्या पनि उस्तै उस्तै— चार–पाँच सय । बेन्च र कुर्सीका स्तर पनि उस्तै । जनाना मर्दानाको दुर्गन्धित ‘पेसाबखाना’ उस्तै । सिनेमा सुरु हुने समयभन्दा आधा घण्टाअघि दर्शक आकर्षित गर्नलाई छानामा जोडिएको लाउडस्पिकरमा फिल्मको गीत बजाउने तरिका उस्तै । डेढ–दुई वर्षअगाडिका फिल्म ल्याउने चलन उस्तै । हलबाहिरको खुला ठाउँमा पान दोकान उस्तै । हो, नयाँ हलको बाहिरको बरन्डा अलिक फराकिलो र सुबिस्ताको थियो । त्यहाँ भित्तामा फलामको मसिनो जालीभित्रको फ्रेममा हाल चलिरहेको र आउनेवाला फिल्मका तस्बिरहरू प्रदर्शन गरिएका हुन्थे । मानिसहरू फिल्म नचलेको बेला बिहान या दिउँसो तिनै तस्बिरहरू हेर्नलाई पनि हलमा पुग्थे ।
उसबेला कुनै स्कुल खोल्नलाई भवन मात्र होइन विद्यार्थी खेल्नलाई भरसक फुटबल मैदानको ठाउँ समेत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । धरान पब्लिक हाइस्कुल र भगवती मिडिल स्कुल (हाल माध्यमिक स्कुल) त्यसका उदाहरण हुन् । त्यसैगरी सिनेमा हललाई पनि प्रशस्त खुला ठाउँ (अहिलेको भाषामा भन्ने हो भने पार्किङ लट) आवश्यक हुन्छ भन्ने ठानिन्थ्यो । त्यसैले दुवै सिनेमाहल बाहिरको ठाउँ फराकिलो थियो । यद्यापि मोटरसाइकल त सारा धरान बजारमा रामकृष्ण डेन्टिस्टको एउटा भएको उसबेला निजी कार चढेर सिनेमा हेर्न आउने कोही थिएनन् ।
तर, त्यही खुलापनले गर्दा मानिसहरू अरू बेला पनि टहल्न वा मटरगस्ती गर्न सिनेमाहलतिर पुग्थे, पान या चिया खान्थे, फिल्मको पोस्टर र तस्बिरहरू हेर्थे अनि फर्कन्थे ।
गणेश टाकिज खुलेपछि फिल्मको त बौछार नै भए जस्तो भयो । पहिले एउटा हल हुँदा महिनामा आउने तीन–चारवटा फिल्म भ्याउन त हम्मे थियो, अब त त्यो संख्या डबलिएको थियो । म पनि मिडिल स्कुलबाट हाईस्कुल पुगिसकेको हुनाले मेरो स्तर पनि पाँच आने क्लासतिर बढिसकेको थियो । समयभन्दा पनि पैसाकै अभावका कारण धेरै फिल्मलाई मन मारेर नहेरीकनै जान दिनुबाहेक अर्को उपाय थिएन । दुइटा हल भएपछि यो या त्यो कुन हेर्ने भनेर छान्न पाउने मौका भने मिलेको थियो ।
उसबेला धरानका लाइब्रेरीमा बनारसबाट छापिने हिन्दीको दैनिक खबरकागज ‘आज’ आउने गर्थ्यो । त्यसबाहेक ‘फिल्मी दुनियाँ’, ‘रंगभूमि’ (र पछिपछि ‘सुषमा’) भन्ने हिन्दी भाषाका सिनेपत्रिका पनि आउँथे, जसको माध्यमबाट नयाँ–नयाँ फिल्म र फिल्मी सिताराहरूबारे जानकारी मिल्थ्यो । ‘धर्मयुग’ र ‘साप्ताहिक हिन्दुस्थान’ गम्भीर खालका पत्रिकाहरू थिए, तर तिनले पनि फिल्मबारेका लेख र तस्बिरहरू छासछुस् छाप्ने गर्थे । ती हिन्दी पत्रिकाहरूले सिनेमाको मेरो भोकलाई झनै जगाइदिन्थे । हलमा पुराना फिल्महरू चले पनि रेडियो सिलोनको ‘आप ही के गीत’ को फर्माइस कार्यक्रम र अमिन सयानीले चलाउने ‘बिनाका गीतमाला’ को माध्यमबाट नयाँ–नयाँ फिल्म र तिनका गीतहरूबारे जानकारी हुन्थ्यो । सिनेमाको डाइलग सुन्दा–सुन्दा हिन्दी पढ्न र बुझ्नलाई केही गाह्रो थिएन । उसबेला फिल्ममा प्रयुक्त हिन्दी भाषामा उर्दूको प्रभाव बढी थियो— गानामा पनि डायलगमा पनि । त्यसले गर्दा देवनागरीमा लेखिएको उर्दूको व्यावहारिक ज्ञान पनि मिलिसकेको थियो ।
एसएलसी परीक्षा दिने बेलासम्ममा आफूलाई मन पर्ने, नपर्ने हिरो–हिरोइन मात्र होइन, कथानक वा विषयवस्तुको पनि छ्यानब्यान गर्ने थोरबहुत बुद्धि ममा पलाइसकेको थियो । मन नपर्ने सिनेमा जानाजान नहेर्ने र मन पर्नेचाहिँ जसरी पनि हेर्ने अनि फिल्मका कलाकारबाहेक त्यसका संगीतकार, गीतकार र निर्देशकका नाम र काम चिन्ने अकिल पनि एक प्रकारले ममा आइसकेको थियो । गायक गायिकाको स्वर खुट्याउने क्षमता पनि विकसित भइसकेको थियो । फिल्मका मन पर्ने गीतहरू त पूरै कण्ठाग्र हुन्थे । उसबेला सिनेमाको कथा, डायलग, गीत, पात्रहरूको चरित्र पनि चिरकालसम्म मनमा गढिरहन्थ्यो ।
सिनेमा हेर्न जानु उसबेलाको सामाजिक जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेको थियो । कुनै खुसियाली मनाउन पर्‍यो या कुनै रमाइलो गर्न पर्‍यो, सिनेमा हेर्न गयो । जाँचमा पास भयो, सिनेमा गयो । साथीभाइलाई ‘ट्रिट’ गर्न पर्‍यो, सिनेमा हेर्न लग्यो । कसैलाई फकाउन वा फुल्याउन पर्‍यो, सिनेमा देखाउने लोभ दियो । कसैलाई भेट्न पर्‍यो, सिनेमाहलमा गयो । शनिबारको ‘म्याटिनी सो’ त चिनेजानेका धेरै जना भेटिने थलो नै हुन्थ्यो । कुनै समारोहमा गएजस्तो हुन्थ्यो सिनेमा हेर्न जाने काम । मानिसहरू सकेसम्म राम्रो परिधानमा ठाँटिएर हलमा आउँथे ।
म्याट्रिक पास गरेर मैले धरान महेन्द्र कलेजको प्रांगणमा कदम के राखें सिनेमा हेर्ने सम्भावनाको अर्को नयाँ ढोका खुल्यो मेरा लागि । भयो के भने आईए क्लासमा मसँगै भर्ना भएर खरसाङका मेरै दाँवलका एक जना विद्यार्थी मेरो बेन्चमा बस्न आइपुग्यो । ऊसित मेरो दोस्ती गाँसिन धेरै समय लागेन । ऊ ब्रिटिस घोपा क्याम्पभित्र बस्थ्यो, त्यहाँको ‘सिभिल लाइन’ मा । उसको पिता क्याम्पमा नोकरी गर्ने बाबुजी वा क्लर्क थिए । उसको साथ लागेर अब म घोपा क्याम्प जान लागें— घुम्न, हल्लिन र रमिता गर्न ।
घोपाको ब्रिटिस क्याम्प सबैथोकले भरिपूर्ण आफैंमा एउटा पूर्ण संसार थियो । पानी र बिजुलीको आफ्नै स्रोत, आफ्नै अस्पताल, आफ्नै पाले पहरा र सुरक्षा, फुटबल मैदान नै तीनवटा, आफ्नै चर्च र मन्दिर, किनमेल गर्ने पल्टनबजार, आफ्नै हुलाक र बैंक, फोहोर र मलमूत्र तह लगाउने आफ्नै प्रणाली, आफ्नै स्कुल, बास्केटबल, भलिबल अनि टेनिस कोर्ट, आफ्नै गेस्टहाउस, बदमासलाई सजाय दिने आफ्नै क्वाटर गार्ड, स्विमिङ पुल, अफिसर्स मेस र सिभिलियन क्लब, आफ्नै ड्युटी फ्री दोकान इत्यादि त्यहाँभित्र थिए । त्यसबाहेक त्यहाँ प्रत्येक हप्ता सिनेमा पनि देखाइन्थ्यो, त्यहाँका सिभिलियन स्टाफ र तिनका परिवारका लागि भनेर । सिनेमा हेर्न टिकट लाग्दैन थियो, तर त्यसका लागि क्याम्पभित्रै बस्ने मानिस हुनुपर्थ्यो वा उसको पाहुना । म मेरो साथीको परिवारको पाहुना बनेर त्यहाँ सिनेमा हेर्न जान थालें ।
आउँदो महिना देखाइने फिल्मको नाम, कलाकार र कुन किसिमको फिल्म हो त्यो खुलाएर समय र तिथिमितिसहितको लिस्ट एक महिनाअगाडि नै क्याम्पवासीहरूलाई उपलब्ध गराइन्थ्यो । त्यसको पीर एउटै थियो— सिनेमा देखाइने साँझ क्याम्पभित्र छिर्न खोजे मूल गेटमा गार्ड बस्ने मामाहरूले रोक्थे । उनीहरूले ‘जान सक्तैन’ भनेपछि सकियो । उनीहरूलाई थाहा थियो, साँझको बखत त्यसरी हूल बाँधेर आउने तरुना तन्देरीहरू क्याम्पभित्रका बासिन्दा होइनन् सिनेमा हेर्नलाई आएका हुन् भनेर । त्यसरी सुरक्षा गार्डहरूबाट रोकिएर उल्टै खुट्टा फर्कन नपरोस् भनेर म बेलुकाको भात माया मार्दै क्याम्पभित्र दिउँसै पस्थें र साथीहरूसित समय कटाउँथे । मेरो साथीले त्यहाँ बस्ने अरूसित पनि चिनजान गराएको थियो र यसप्रकार चिनारुहरूको सर्कल फराकिलो हुँदै गएको थियो । त्यसैले मलाई समय कटाउन कुनै समस्या थिएन ।
त्यहाँ देखाइने सबै फिल्महरू यतिन्जेल मैले हेर्दै आएको हिन्दी सिनेमाभन्दा बेग्लै थिए, त्यसको दुनियाँ नै अर्को थियो । अंग्रेजी भाषाका भएकाले मात्र होइन विषय, कथावस्तु, प्रस्तुति, प्रविधि हरेक कुराले ती फरक थिए र उम्दा पनि थिए । त्यतिन्जेल ब्लाक एन्ड ह्वाइटको युग पनि लगभग समाप्त भइसहेको थियो । गीत, संगीत र नृत्यप्रधान थिए हिन्दी फिल्महरू । नायक नायिकको भूमिका एउटा खास साँचोमा ढालिएका हुन्थे । नायक आदर्शवान् र सद्गुणी हुन्थ्यो, धिरोदात्त नायकका यावत् गुणहरूले युक्त । ऊ अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध लड्थ्यो र असहाय, कमजोर एवं अबलाको रक्षा गर्थ्यो । उता नायिका एउटी आदर्श नारीका गुणहरूले युक्त हुनुपर्थ्यो, हर्ष विशादमा गीत गाएर आफ्नो मनको बह पोख्ने । फेरि सन् १९५० को दशक भनेको जवाहरलाल नेहरूको समाजवादी बयार चलेको बेला थियो । त्यस बयारबाट उसबेला बनेका फिल्महरू पनि अछुता थिएनन् । त्यसैले धेरैजसो फिल्ममा नयाँ संसार निर्माण गर्ने सन्देश हुन्थे । अमीर र गरिब, मिलमालिक र मजदुर, जमिनदार र किसानबीचको संघर्ष अनि असल र खराबबीचको द्वन्द्व देखाइन्थ्यो, जहाँ अन्त्यमा असलको जित हुन्थ्यो ।
यता इङ्लिस फिल्महरूको कुरै अर्को थियो । ड्रामा, वार, वेस्टर्न, स्पाई थ्रिलर, क्राइम एन्ड सस्पेन्स, हिस्टोरिकल, हरर, साइफाई यी अनेक विधा वा ‘जनर’का फिल्महरू आउँथे घोपा क्याम्पमा । फोटोग्राफी, म्युजिक, अभिनयको क्लास नै छुट्टै । देखाइएका हरेक कुरा वास्तविक लाग्ने । सुरुसुरुमा सिनेमाका पात्रहरूले बोल्ने अंग्रेजीको छेउटुप्पो बुझ्दिनथें । अभिनेता अभिनेत्रीहरूको अनुहार छुट्याउन पनि केही समय लाग्यो । तर, बिस्तारै रस भिज्न थाल्यो । ती फिल्मका माध्यमबाट सात समुद्रपारिका दुनियाँको सयर गर्न सकियो । बाइबलका अदभुत कथा र सेक्सपियरका नाटकका स्वाद पाइयो । हिटलर र मुसोलिनीका दुर्दान्त किस्सा थाहा भयो । सर्लक होम्स र जेम्स बोन्डको चिनारी मिल्यो । हलिउड र ब्रिटिस सिने संसारका महान् हस्तीहरूको कलाकारिता हेर्न पाइयो ।
त्यसो भन्दैमा मैले इंग्लिस फिल्महरूसित लहसिएर हिन्दी सिनेमा हेर्न चटक्कै बिर्सें भन्ने होइन । मेरा लागि हिन्दी सिनेमा ‘देशीय’ थिए भने इङ्लिस फिल्म ‘अन्तरदेशीय’ । सन् १९५० र ६० को दशकलाई हिन्दी फिल्मको स्वर्णयुग भन्ने गरिन्छ । उता हलिउडले पनि त्यसबेला आफ्नो कायामा गुणात्मक परिवर्तन गरिरहेको थियो । दुवै फिल्म संसारका आफ्नै स्वाद र मजा थिए अनि मैले कलेज जीवनको पाँच वर्ष पढाइको साथसाथै सिनेमन्दिरको उपासना र अर्चनामा बिताएँ ।
सिनेमाप्रतिको मेरो यस असीम लगावले म जुन नयाँ ठाउँमा गए पनि सिनेमा हेर्नु मेरो प्राथमिकता हुन्थ्यो । सानो गाउँ र कस्बादेखि ठूला सहरहरूमा मैले नबिराई हलमा गएर सिनेमा हेरेको छु । एकै दिनमा तीन तीनवटा फिल्म हेरी भ्याएको छु, त्यो पनि गोरखपुरमा र आजभन्दा ५० वर्षअघि ।
अंग्रेजीमा भनिने मेरा ‘फर्म्याटिभ इयर्स’ मा सिनेमाले मेरो मनमस्तिष्कमा के प्रभाव पार्‍यो र मेरो जीवन दर्शनमा के परिवर्तन ल्यायो त्यो म किटेर भन्न सक्तिनँ । तर, एउटा कविले जसरी काव्यात्मक ढाँचामा भन्ने हो सायद सिनेमाले सपना देख्न सिकायो । त्यसमा रंग र संगीत भर्न सिकायो । जीवन र जगत्लाई हेर्ने एउटा दृष्टि दिलायो । जीवनलाई आफ्नै सर्त बाँच्ने बाटो देखायो । नशा पो हो कि जस्तो मलाई लागेको थियो सिनेमा हेर्ने आफ्नो बानी आफैंलाई । किनभने धेरै जना सिनेमाप्रतिको मेरो अनुराग देखेर नाक खुम्च्याउँथे र मेरो खिसीट्युरी गर्थे । क्रान्तिकारी र प्रगतिशील भनाउँदाहरूको दृष्टिमा त यो हेयपूर्ण क्रियाकलाप थियो । यसै पनि हिन्दी फिल्म उनीहरूका लागि भारतीय विस्तारवादको औजार थियो । तर, सन् १९७३ तिर म ‘समीक्षा’ साप्ताहिकमा काम गर्दा मदनमणि मास्टरसाबले ‘एउटा राम्रो फिल्म हेर्नु भनेको राम्रो पुस्तक पढ्नुजस्तै हो’ भनेको सुनेदेखि बल्ल लाग्यो सिनेमा हेरेर मैले गलत काम गरेको रहेनछु । मास्टरसाब आफैं फिल्मको भोगी हुनुहुन्थ्यो । उहाँको भनाइलाई मान्ने हो भने कागतमा छापिएको भन्दा पर्दाको पुस्तक मैले धेरै पढेको छु सायद ।
सन् १९८० को दशकमा भिडियोको प्रादुर्भाव भएपछि सिनेमा हलले महत्त्व गुमायो । एकताकाको मन्दिरमा उपासकहरू जान छाडे । समयको चक्रले फेरि तानेर दर्शकलाई सिनेमा हलमा फर्कायो । तर, अहिलेका ‘मल्टिप्लेक्स’ मा सिनेमा हेर्दा पहिलेको जस्तो मज्जा र रोमाञ्च कहाँ ?
संयोग भनौं या प्रारब्धको खेल । बितेका बीस–बाइस वर्षदेखि म काठमान्डु इन्टरन्यासनल माउन्टेन फिल्म फेस्टिभलको आयोजनासित जोडिँदै आएको छु । पछाडि फर्केर हेर्दा लाग्छ, सिनेमन्दिर जाने त्यही पुरानो बानीले पो मलाई यस कामसित यस प्रकार अहिलेसम्म जोडिराखेको हो कि !
प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७७ १०:०२